Non-Performing Loans (NPL) खराब कर्जा भनेको के हो? - सरकारी जागिर
November 17, 2020 Sarakari JagirLeaveaComment on Non-Performing Loans (NPL) खराब कर्जा भनेको के हो?
बैंक वित्तीय संस्थाले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिइएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जा Non-Performing Loans (NPL) भनिन्छ । यसलाई नन पर्फमिङ लोन अर्थात् एनपिएल पनि भनिन्छ ।
निश्चित समयभित्र भुक्तान गर्ने गरी कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई निश्चित रकम उपलब्ध गराउँछ । यद्यपि, कहिलेकाहीँ ऋणीले निर्धारित समयमा ऋण चुक्ता नगर्ने अर्थात् गर्न नसक्ने अवस्था पनि आउँछ । ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछि सम्म पनि बैंकले आफूले दिएको ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराब कर्जा Non-Performing Loans (NPL) अन्तर्गत राखिन्छ ।
सम्भव भएसम्म यस्तो कर्जा ऋण लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरेर उठाइन्छ । कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराबकर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ ।
सर्वसाधारणबाट उठाएको निक्षेप विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेर बैंकले नाफा आर्जन गर्ने गर्दछ । यद्यपि, लगानी गरेको पैसा नै नउठ्दा बैंकको नाफामा गिरावट आउदा बैंकले नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ । खराब कर्जा बढेर समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेको बैंकलाई सर्वसाधारणले पनि विश्वास गर्दैनन् । खराब कर्जाले बैंकको छविलाई नै गिराउने अर्थात् बैंकप्रति सर्वसाधारणको भरोसा नै गुम्न पुग्छ ।
कतिपय बैंकले व्यक्तिगत सम्बन्ध अर्थात् चिनेजानेको भरमा कर्जा पास गराउने गरेका कारण पनि बैंकले घाटा व्यहोर्ने स्थिति आइपर्ने गरेको छ। यसैगरी बैंकहरुले जथाभावी रुपमा कर्जा लगानी गर्दा यस्तो समस्या आउँछ । साथै अनुत्पादनमूलक क्षेत्रमा गरिएको लगानी डुब्ने खतरा बढी हुन्छ ।
यो पनि, MIS को महत्व
लगानी गर्न लागेको क्षेत्रको अध्ययन नगर्दा पनि यस्तो समस्या निम्तिन्छ । यस्ता क्रियाकलापहरुका लागि बैंकप्रतिको विश्वास घट्दै जाने हुन्छ। जसले गर्दा बैंकतथा वित्तीय संस्थामा कारोबार कम हुन गई व्यवसायमा उल्लेख्य ह्रास आउँछ र संस्था समस्याग्रस्त हुन जान्छ ।
एनपिएल ५ प्रतिशत भन्दा बढी भएको बैंक तथा वितिय संस्थाले मुनाफा आर्जन गरेपनि लाभांश वितरण गर्न सक्दैन । यसले ऋणको गुणस्तरीयतासँगै व्यवस्थापनको अवस्था पनि देखाउँछ। एनपिएल जति कम भयो, त्यति राम्रो मानिन्छ । त्यसैले एनपिएल कम भएको कम्पनी छान्नु उपयुक्त हुन्छ ।
बैंकको परिक्षा तयारी गने हरुको लागि मेरो लगानीमा प्रकाशन भएको साभार सामग्री
Tagged non-performing loansnpl
(महत्वपुर्ण) हेर्नुहोस १५० बढी लेखा सम्बन्धि प्रश्न -नेपाल राष्ट्र बैंक तयारी
February 13, 2019 July 24, 2019 Sarakari Jagir
Computer shortcut keys : Word and Excel
May 14, 2020 May 15, 2020 Sarakari Jagir